मनोरञ्जन – Page 155 – Sawal Nepal ||The Power of Information
यस्तो छ कटप्पाले बाहुबलीलार्इ मार्नुको कारण
बैशाख । बहुप्रतिक्षित भारतीय फिल्म ‘बाहुबली–२’ मा कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे भन्ने रहस्य खुलेको छ । दैनिक भास्करका अनुसार राजमाता शिवगामीको आग्रह अनुसार बाहुबलीलाई कटप्पाले मारेका थिए । आजभन्दा २२ महिना पहिला प्रदर्शन भएको बाहुबली १ मा यसलाई रहस्यको विषय बनाइएको थियो । भास्करमा बताइए अनुसार फिल्म निर्माणको सुरुमा बाहुबली मारिने कथा थिएन । यो फिल्मको
रामकृष्ण ढकालका कहिल्यै भूल्न नसकिने घटनाहरु यस्ताछन्
सानो छँदा स्वरसम्राट नारायणगोपालका फ्यान थिए, रामकृष्ण ढकाल । नारायणगोपालकै गीत आफ्नो कण्ठमा उतार्थे । तर, ०४३ सालपछि ढकाल औपचारिक रूपमा आफैँ गायक भए । ५० को दशकपछि कैयौँ श्रोता ढकालकै फ्यान बन्न थाले । नेपाली आधुनिक, पप र प्लेब्याक गीतमा चर्चित गायकको छवि बनाएका ढकालको स्वरमा भुतुक्कै हुने कैयौँ फ्यान छन् । तर, ढकाल
युनिक धमाका का कलाकार मलेसिया पुगे सृजना ,रोशन,प्रकाश र हेमा
सृजना ,रोशन,प्रकाश र हेमा को धमाका रहने मलेसिया मजदुर दिबश को अबशर मा आयोजित युनिक धमाका ५ मा आफ्नो प्रस्तुती दिनका लागि नेपाल बाट कलाकार मलेसिया छ्न । चर्चित लोक पप गायिका सृजना खत्री (हाउडेमाया) लोक आधुनिक गायक रोशन सिङ डान्सर हेमा ढुंगाल लोक गायक प्रकाश योगी लगायत कलाकार को प्रस्तुती रहने सो धमाका को
धेरै राम्री हुनुको पीडा, सरकारले नै दुख दियो
आफू राम्री नभएकोमा केही युवती चिन्तित हुन्छन् । तर, एक २४ वर्षीय युवती भने अत्याधिक राम्री भएकी कारण समस्यामा परेकी छिन् । नायिकाको रुपमा देखा पर्ने यीनि सुन्दरी भएका कारण प्रतिवन्धित नै हुनुपरेको छ । कम्बोडियाली नायिका डेनी ननलाई अर्को एक वर्षसम्म नयाँ फिल्म बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । उनी सेक्सी भएको भन्दै त्यहाँको सरकारले
गाउँ बस्ति ब्युझाउँन थाल्ने, बेला भयो सूर्यमा भोट हाल्ने – चुनावी गीत
काठमाण्डौ, १६ बैसाख – स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को मिति नजिकिँदै जाँदा देशमा चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ । पार्टीहरु आफ्ना उमेदवारको छनोट र चुनावी घोषणापत्र बनाउन ब्यस्त छन् । गीतसंगीत क्षेत्रपनि निर्वाचनबाट अछुतो छैन । यसै सन्दर्भमा गायक भीमसेन खतिवडा र तारा लामिछाने मगर आफ्नो नौलो चुनावी प्रस्तुति लिएर आएका छन् । ‘सूर्य झन्डा
अर्पण शर्माः जसको स्मरणशक्तिले सबैलाई चकित बनाउँछ गित गाउन पनि खपिस
झापा । अर्पण शर्मा कट्टेल तेज स्मणशक्ति भएका यस्ता युवा हुन्, जो वस्तुहरूको नामको लामो सूची एकचोटि हेरेपछि क्रम नटुटाई सरासर भन्न सक्छन् ।यही प्रतिभाका कारण उनले गिनिज बुक अफ द वल्र्ड रेकर्ड्समा आफ्नो नाम लेखाइसकेका छन् ।उनले एक मिनेटमा ४२ वटा वस्तु चिनेर कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । सन् २०१४ सेप्टेम्बर २६ तारिखमा उनले
अल्ट्रा धावकमा बिश्वबिजेता मिरा राइलेृ बिवाहको बिषयमा के भनिन् उनि कस्तो केटा चाहान्छिन् ? हेनुहोस् रमाइलो गफ (भिडियो)
‘फ्याट टु फिट’ भएका ८ बलिउड स्टार, जसले घटाए अस्वभाविक तौल
बलिउड स्टारहरुको जीवन टाढाबाट हेर्दा जति सुन्दर देखिन्छ नि, नजिकबाट नियाल्ने हो भने त्यति नै जटिल छ । कलाकारलाई फिट रहन कडा मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता कैयौ स्टार छन्, जसले माटोपन घटाउन धेरै पसिना बगाउनु पर्यो र स्लिम पनि बने । हेर्नुस् कडा मेहेनत पछि फिट बनेका चर्चित अनुहारहरु । जरिन खान -अभिनेत्री जरिन खान
राधे यस्तो रहेछ (हेर्नुहोस भिडियो)
बिष्णुप्रसाद पोखरेल दमक/केहि दिन अघि देखि नै पाथिभरा चलचित्र मन्दिर दमकका प्रो. चैतन्य बरालले राधे चलचित्र हेर्नका लागि भनिरहेका थिए । उनले सकेसम्म प्रीमीयर सो गर्ने र नभए बैखाख १ गते नयाँ बर्षको दिनदेखि चलचित्र लाग्ने भएकाले नयाँ बर्षको दिन कतै समय नदिन र चलचित्र हेर्न उनको केहि दिन अघिदेखि कै आग्रह रहेको थियो ।
प्रकाश कटुवालले इजरायलमा सिरानी टाङ मुनि भन्दा दिदि बहिनी को यस्तो हंगामा (भोडियो सहित )
प्रकाश योगी डाडे बिरालो , चोर बिरालो पल्क्यो ,यो रक्सी को गन्ध ,साडे गोरु जस्ता निकै चर्चित गित लागायत झन्डै पाचसय गितमा आवाज दि सकेका गायक प्रकाश कटुवाल पछिल्लो समय मा देश तथा बिदेश का कार्यक्रम मा माग हुने कलाकार मध्य अग्र स्थान मा हुनुहुन्छ। लोक दोहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा निकै चर्चा र देश बिदेशका कार्यक्रममा